ENGLISH FOR SUCCESS: December 2007
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဟာသလေးတွေပါ။ သင်ခန်းစာတွေချည်းဖတ်ရတာ ပျင်းနေကြမှာစိုးလို့။
Posted by MM Scholar at 11:40 PM No comments:
Labels: Joke, MMThinker
Last post: Vocabulary Chapter-1
Exercise I: Fill in the blanks
1) Because Frank seems so _____ , everyone believes him even when he tellsalie.
2) The drummer told interesting ____s about famous rock singers he had played for.
3) People often take ____ steps in anger, and they later regret their extreme actions.
4) When he saw no way to ____ the plane crash, the pilot parachuted to saftety.
5) Inatraditional wedding, the clergyman or clergy woman is often wordy, while the bride and groom are very ____ , saying just " I do."
6) Any player who does not ___ with the rules will be dropped from the team.
7) A couple of older boys tried to ____ some first-gradders to hand over their lunch money.
8) To earn money for college, Theo felt he had to either join the army or getajob. He didn't like either ____ .
9) When the real ax-murderer confessed, the police had to ____ that the wrong man had been jailed.
10) In most American schools, it is not ____ for students to call their teachers by their first names.
Exercise II: Fill in the blanks
1-2. " I ___ that you haveaperfect right to do whatever you like with your hair, " said the teenage girl's mother. " But, to be ___, I don't find green curls attractive."
3-4. In colonial America, it was thought ____ forawife to ____ with all her husband's commands.
5-6. " The poor economic situation leaves me no ____, " said the company president. " It ____s me to lay off some of our workers. "
7-8. Our business instructor told an ____ aboutacompany that ____(e)d failure by sharing ownership with all its workers.
9-10. The sale sign was huge but ____. It said only, " _____ price cuts."
Exericise I >>
မှတ်ချက်.. Building Vocabulary Skills စာအုပ်မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by Winkabar at 1:55 PM No comments:
Labels: ၀င်္ကပါ, vocabulary
Last post: Vocabulary Intro
ပထမစစချင်း ဝေါဟာရတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို dictionary ထဲမှာမရှာပဲနဲ့ အောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါ။
Vocabulary များ၏အဓိပ္ပာယ်တွေကို စာကြောင်းတွေကနေခန့်မှန်းပြီးတော့ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုံးလုံးထဲမှအနီးစပ်ဆုံးစာလုံးကိုရွေးပါ။
1) acknowledge - v
Stubborn people often find it difficult to acknowledge their errors. They hate to admit they were wrong.
Acknowledge means- a. to deny b. to admit c. to remember
2) alternative - n
The teacher stated the alternatives to Tim-retake the test or getaD for the course.
When her dog began to suffer from cancer, Wanda felt she had no alternative. He would have to be put to sleep.
Alternative means- a.achoice b.acommand c. an assignment
3) anecdote - n
Dad told the children an anecdote about getting his tie caught inafile cabinet at work just as the boss walked in.
I once heard an anecdote aboutastagehand's revenge onabossy actor. The stagehand put wheels onatable used in the play, so when the actor leaped onto the table during the most dramatic scene, he rolled straight off into the wings.
Anecdote means- a. an error b.a short, interesting story c. an article
4) appropriate- adj
Chuck has little sense of what is socially appropriate. For example, he went to his sister's wedding in running shoes.
Appropriate means- a.illegal b. fun c. proper
5) avert- v
Renata averted an unpleasant meeting with her ex-boyfriend by leaving the store before he saw her.
To avert an accident, Larry turned his car sharply to the right and ran intoastop sign.
Avert means- a. to begin b. to prevent c. to report
6) candid- adj
I'll give you my candid opinion, but you may not like what you hear.
My heart always sinks when Robbie invites me to his house for dinner. He'sawonderful person, but to be candid, he'saterrible cook.
Candid means- a. honest b. friendly c. careful
7) compel- v
My history teacher would often compel us to do useless work, such as memorizing the date each state entered the union.
If the law did not compel people to pay taxes, no one would pay them.
Compel means- a. to help b. to forbid c. to force
8) comply- v
"My wife is so used to being the boss at work, " Martin said, "that she is annoyed when I don't comply with her every request at home."
Comply means- a. to argue b. to do as asked c. to hear
9) concise- adj
Because of limited space, most newspaper articles must be concise.
Unlike many politicians, our mayor is concise- his speeches are short but say much.
Concise means- a. wordy b. correct c. clear and brief
10) drastic- adj
The company's new president took drastic steps, closing two factories and laying off three hundred employees.
"This time I will let you off with just an hour of staying after school, " the pricncipal said, " But if it happens again, the punishment will be more drastic."
Drastic means- a. unimportant b. extreme c. easy
1) acknowlege- C [ ၀န်ခံသည် ]
2) alternative - A [ ရွေးချယ်ခြင်း ]
3) anecdote - B [ ပုံပြင်တို ]
4) appropriate - C [ သင့်တော်သည် ]
5) avert - B [ ကာကွယ်သည် ]
6) candid - A [ ပွင့်လင်းသည် ]
7) compel - C [ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည် ]
8) comply - B [ လိုက်နာသည် ]
9) concise- C [ လိုရင်းတိုရှင်း]
10) drastic- B [ ပြင်းထန်ထိရောက်သော]
အခုအဓိပ္ပာယ်တွေသိသွားပြီဆိုတော့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုစမ်းဖြေကြည့်ပါဦး။ Defintions တွေကိုသက်ဆိုင်ရာစာလုံးများနှင့်တွဲပေးပါ။
1) To do as commanded or asked
2) Proper; suitable to the situation
3) A choice
4) Extreme; harsh or intense
5) To admit or confess
6) To force
7) Very honest
8) An interesting short story about an event
9) Saying much inafew clear words
10) To prevent; to avoid
ဤလေ့ကျင့်ခန်း၏အဖြေနှင့် နောက်ဆက်တွဲလေ့ကျင့်ခန်းများကို နောက်နေ့တွင် ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမည်။
Posted by Winkabar at 6:51 PM4comments:
Vocabulary လို့ခေါ်တဲ့ဝေါဟာရတွေအကြောင်းတွေကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် ဟာဝေါဟာရကြွယ်ဝမယ်ဆိုရင်သူစာရေးတဲ့နေရာမှာစကားလုံးတွေကိုကြွယ်ကြွယ်၀၀
အမှန်ပါပဲ။ ပြီးတော့လည်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်ကူလာမှာပါ။ အဲလိုဝေါဟာရတွေကိုကျက်မယ်လေ့လာမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့...
၁) စာလုံးအသစ်တွေကိုကျက်မယ်ဆိုရင်စာလုံးချည်းပဲ မကျက်ပဲနဲ့ဝါကျအနေနဲ့မှတ်ခြင်း
၂) ကျက်ပြီးရင် ဒီအတိုင်းမနေပဲနဲ့တတ်နိုင်သလောက်ကိုယ်ကျက်ထားတဲ့ဝေါဟာရတွေကို အမြန်ဆုံးလက်တွေ့အသုံးချခြင်း
၁) ၀ါကျအနေနဲ့မှတ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲဒီဝါကျကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်။ သူ့မူရင်းဝါကျကိုသုံးချင်သုံး၊ မသုံးရင်လည်းကိုယ်ပိုင်ဝါကျတစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ထောက်ပြနိုင်တဲ့ဝါကျမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။၀ါကျနဲ့
၂) အမြန်ဆုံးလက်တွေ့အသုံးချပါဆိုတာကတော့ စာလုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲသိပြီးမသုံးရင် ဒါမှမဟုတ်အမြန်ဆုံးအသုံးမချဘူးဆိုရင်အလကားပါပဲ။ အမြန်ဆုံးသုံးလိုက်မှ ဒီစာလုံးတစ်လုံးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဘယ်နေရာမှာသုံးရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကိုသိလာမှာပါ။ ဒီတော့စာလုံးတစ်လုံးကိုစကျက်တာနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြာလာတာနဲ့ကိုယ်ကဒီစာလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှိလာမှာပါ။ အဲဒီစာလုံးကလည်းကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်လာမှာပါ။ နောက်ပြီးအဲလိုသုံးလိုက်ရင် ပိုပြီးတော့မှတ်မိစေပါတယ်။
Posted by Winkabar at 1:44 PM 1 comment:
ဒီတစ်ပတ်တော့ BBC World Service မှာတင်ထားတဲ့ Vegetable Idiom လေးကို ကူးပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1132_videoenglish_10/ မှာတော့ Video လဲ တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အရင် အပတ်လိုပဲ ဘာသာမပြန်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခက်အခဲမရှိလောက်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
In this episode, The Teacher introduces you to three idiomatic phrases connected with vegetables.
1. It'sahot potato
2. A carrot and stick
Hello, I’mavery interesting and intelligent man. And today, this carrot, these peas and this potato are going to be teaching you some idioms in English.
He thinks these lessons are just… silly.
In English, if there’sadelicate issue and people can’t agree we call ita‘hot potato’.
In English, if someone tries to persuade us to do something using an incentive andathreat, we call ita‘carrot and stick’.
Posted by ဗမာပြည်သူ at 5:30 PM No comments:
catch (someone) in the act
to discover (someone) in doing something wrong
တစ်စုံတစ်ယောက် မဟုတ်တရုတ် လုပ်နေတာကို တွေ့ရှိသွားခြင်း။
e.g., The burglars were caught in the act of climbing in throughawindow.
ပြတင်းပေါက်ကို ကျော်ဝင်နေသော ဖောက်ထွင်းသူများကို ဖမ်းမိသွားခဲ့သည်။
to get oneself organized:
e.g.,If you're ever going to findajob you'll have to start getting your act together.
တကယ်လို့သာ အလုပ်တစ်ခုကို ရှာဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စီမံတတ်ရတော့မယ်။
to join or copy someone in doing something successful or fashionable, esp in order to share in his or her success:
အထူးသဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ခုရဲ့ အောင်မြင်မှု၊ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ အတုယူခြင်း။
e.g.,Now that it is obvious that the computer industry is very profitable,alot of companies are anxious to get in on the act.
အခုတော့ သိသာထင်ရှားသွားပီ၊ ကွန်ပျူတာ ကုမ္ပဏီတွေ အကျိုးအမြတ်ရတာနဲ့ မြောက်များစွာသော ကုမ္ပဏီများသည် ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုကို လိုက်ပါ အတုယူဖို့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပါဝင်ဖို့လုပ်နေကြပီ။
e.g.,I thought she had hurt herself, but she was only putting on an act.
သူမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိခိုက်တယ်ထင်နေတာ လက်စသတ်တော့ ဟန်ဆောင်နေတာကိုး။
a state of readiness for activity:
လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခုမှာပါဝင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော။
e.g.,Action station! The concert is about to begin!
အသင်ပြင်ထားကြပါ။ မကြာမီ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ စတင်ပါတော့မယ်။
e.g.,We have no wine__you'll just have to have Adam's ale.
ငါတို့မှာ သောက်စရာ ဘာဝိုင်မှမရှိဘူး......ရေပဲသောက်ရတော့မယ်။
not to know (someone) from Adam
not to recognize (someone); not to have any idea who (someone) is:
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မသိခြင်း၊ သူနဲ့ပါတ်သက်၍ မထင်မြင်မသုံးသပ် တတ်ခြင်း။
e.g., John may have been at the party, but I wouldn't know him from Adam.
ဂျွန် ပါတီပွဲမှာ ရှိရင်ရှိနေမယ်၊ ငါသူနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သေချာကို မသိဘူး။
အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နောက်မှ ပြန်တွေ့မယ်လေနော့။
Posted by Chaos at 11:41 PM No comments:
ဒီတစ်ပတ်မှာ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်၊ ပြီးတော့ အဓိပ္ပာယ် မတူသော စကားလုံးများ ကို ပျင်းများပျင်းနေသလားလို့BBC World Service မှာတင်ထားတဲ့ Fruit Idiom လေးကို ကူးပြီး ပေးလိုက်ပါတယ်။http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1110_videoenglish_14/ မှာတော့ Video လဲ တင်ထားတာ ရှိပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လို သင်ထားတာ၊ ပြောထားတာကို အတွေ့ အကြုံရအောင် သူ့ အတိုင်းပဲ ဘာသာမပြန်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခက်အခဲမရှိလောက်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
In this episode, The Teacher introduces you to three idiomatic phrases connected with fruit.
2. It'sacase of sour grapes
3. A second bite of the cherry
Hello, I’mavery interesting and intelligent man. And today, these bananas, this cherry, these grapes and I will be teaching you some English idioms.
I bet you’ve never been taught by some fruit before.
Now as we know, all sensible fruit is round and green, or red, or orange. But not this fellow.
No, the banana is long and yellow and he bends.
Whatacrazy fruit!
And what’s more… monkeys eat them. And we all know what monkeys are like.
In English, if someone is very emotional and starts shouting and behaving inacrazy way, we say he’s gone bananas.
To go bananas.
Like me when I scored the winning goal in the last minute of that cup final. I went completely bananas.
Oh really, well, that’s wonderful for you. Yes, but you know there’s more to life than money – it doesn’t really interest me at all.
That was my boss. He’s won the lottery – twenty million pounds!
I told him I wasn’t really interested in money, so I’m not jealous at all…but it’s not true. I wish I was rich!
Yes, it’sacase of sour grapes.
In English, if somebody pretends not to be impressed by something because they are jealous, we say it’sacase of sour grapes.
It’sacase of sour grapes.
At least now he's so rich, perhaps he'll leave.
Did you know I could juggle?
Hang on, give measecond bite of the cherry.
In English, if we try to do somethingasecond time because we failed at first, we call itasecond bite of the cherry.
A second bite of the cherry.
How aboutathird bite of the cherry? What do you mean there are no cherries left?
Posted by ဗမာပြည်သူ at 7:23 PM No comments:
Posted by Phyoe Kyaw at 4:14 PM 1 comment:
တစ်ခေတ်တစ်ခါက သုံးခဲ့ဖူးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းတွေဟာ အချိန်ရွေ့လျောမှုနဲ့အတူ ခေတ်မမှီတော့တဲ့၊ မသုံးသင့်တော့တဲ့ စာလုံးတွေရှိပါတယ်။ အဲလို ခေတ်နဲ့ မလျော်ညီပဲ ဆက်လက်သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ စာလုံးအချို့ထဲမှာ sexist language လဲပါတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် sex-role stereotyping ကို ရှောင်ရမယ်။
After the nursing student graduates, she must faceadifficult state board examination.
ဒီစာကြောင်းမှာ သူမ လို့သုံးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ယောင်္ကျား နာစ်တွေရှိတာကိုလဲ သတိပြုရပါမယ်။
Wives of senior government officials are required to report any gifts they receive that are valued at more than $100.
မသုံးသင့်သော ဝေါဟာရအချို့ကို ကျမ ရေးပါမယ်။ အဲဒီစကားလုံးတွေနေရာမှာ ဘာသုံးသင့်သလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါနော…
တစ်ကယ်တော့ Businessman တို့ Chairman တို့ စတဲ့ အထက်ကအသုံးအနှုန်းတွေက ခေတ်မမှီတော့ပါဘူး။ အဲလိုဝေါဟာရတွေနေရာမှာ ဘာတွေသုံးမလဲ စဉ်းစားပြီးရင် အောက်ကအဖြေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရန် ဆက်ကြည့်ပါနော်။
Business executive, businessperson
Chairperson, moderator, chair, head
Member of the clergy, minister, pastor
Member of Congress, representative, legislator
Mail carrier, postal worker, letter carrier
Weather forecaster, meteorologist
နောက်တစ်ခါကျရင်.. ရိုးရှင်းသော စကားလုံးများနဲ့ euphemism ကိုယှဉ်တွဲ ပြပါဦးမယ်..
Diana Hacker’s A Writer’s Reference – Fourth Edition
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ carry ရဲ့ အတွဲလိုက် အဓိပ္ပာယ် တွေကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ်မှ နောက်အသစ် တစ်ခု တက်တာပေါ့။
1) (be/get) carry (somebody) away - စိတ်လှုပ်ရှား၍ စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်သည်
Eg.The crowd were carried away by his passionate speech.
သူ့ ရဲ့အားပါလှတဲ့ မိန့် ခွန်းက လူထုကြီးကို စိတ်လှုပ်ရှားစေတယ်။
2) carry (something) off ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အောင်မြင်သည်
Eg. She was nervous about givingatalk to her colleagues, but she carried it off very well.
သူမက သူ့ ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို မိန့် ခွန်းပြောဖို့ စိတ်ပူခဲ့ပေမယ့် ကောင်းကောင်း အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
3) carry (something) on (CONTINUE) ဆက်လက် လုပ်ဆောင်၊ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်စေသည်
Eg. Let's carry on this discussion at some other time.
ဒီဆွေးနွေးချက် ကို နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာ ဆက်ကြတာပေါ့။
Eg. Sorry to interrupt, do carry on (with what you were saying).
ဖြတ်ပြောရတာ အားနာပါတယ်။ (မင်းတို့ ပြောနေတာ) ဆက်ပြောပါ။
4) carry on (BEHAVE) စိတ်လှုပ်ရှား၊ စိတ်အားတက်ကြွ နေသည်
Eg. The children have been carrying on all day.
ကလေးတွေက တနေ့ လုံး စိတ်လှုပ်ရှား တက်ကြွနေတယ်။
5) carry on (HAVE SEX) ညားနေသည်
Eg. Is it true that Rachel and Marcus have been carrying on (with each other) ?
Rachel နဲ့Marcus ညားနေကြတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား။
6) carry (something) out (တာဝန်ခံထားသည့် အရာ၊ တာဝန်ပေးထားသည့် အရာ) လုပ်၊ ပြီး သည်
Eg. Don't blame me, I'm only carrying out my orders/instructions.
ငါ့ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ။ ငါကတော့ ငါ့တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်ရတာ။
7) carry (something) over (DO LATER) အချိန်ရွှေ့ သည်
Eg. The performance has had to be carried over to/till next week because the repairs to the theatre aren't finished yet.
ဇာတ်ရုံကြီး ပြင်ဆင်နေတာ မပြီးသေးလို့ ကပွဲကို နောင်အပတ်ထိ အချိန်ရွှေ့ ထားတယ်။
8) carry (something) over (EXIST/AFFECT) အခြေအနေတစ်ခုမှ အဖြစ်အပျက်ကို နောက်အခြေအနေ တစ်ခုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်မပြု
Eg. I try not to let my problems at work carry over into my private life.
ငါ ရုံးကပြဿနာတွေကို ငါ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘ၀ထဲ သယ်မလာဖို့ ကြိုးစားတယ်။
9) carry (somebody) through (sth) (HELP) ခက်ခဲသော အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် အားပေးသည်။
Eg.The soldiers' courage carried them through.
စစ်သားတွေရဲ့သတ္တိက သူတို့ ကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေတယ်။
10)carry(something) through (COMPLETE) ကိစ္စတစ်ခု အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသည်
Eg. It is doubtful whether it will be possible to carry through the education reforms as quickly as the government hopes.
ပညာရေးကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကိစ္စအောင်မြင်ဖို့အစိုးရ မျှော်လင့်ထားသလို မြန်မြန်ပြီး နိုင်မလား ဆိုတာကတော့ သံသယဖြစ်ဖွယ်ပါပဲ။
11)carry the can မအောင်မြင်၊ မှားယွင်းသော ကိစ္စကို ခေါင်းခံသည်။
Eg. As usual, I was left to carry the can.
ထုံးစံအတိုင်း ငါပဲ ခေါင်းခံလိုက်ပါမယ်။
12)carryatorch for (somebody) ချစ်ကြိုက်သည်
Eg. Terry has been carryingatorch for Liz for years, but she seems not to notice.
Terry က Liz ကို ကြိုက်နေတာ ကြာလှပေမယ့်Liz ကတော့ သိတောင်သိပုံမရဘူး။
13)carry/take coals to Newcastle -ပေါများသောဒေသသို့ သွား၍ပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်း
Eg. Exporting pine to Scandinavia seemsabit like carrying coals to Newcastle.
စကင်ဒီနေးဗီးယားကို ထင်းရှူးပင်ပို့ မယ်ဆိုတာကတော့ နယူးကာဆယ်ကို မီးသွေးပို့(တရုပ်ပြည်ကို အပ်ရောင်းသွား) သလို ဖြစ်နေမှာပေါ့။
14)as fast as your legs would carry you မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်
15)fetch and carry for (somebody) တောက်တိုမယ်ရလုပ်ပေးရသည်
Posted by ဗမာပြည်သူ at 5:45 PM No comments:
ကိုယ့်မိခင်ဘာသာစကားကလွဲပြီးတော့တခြားဘာသာစကားသင်တယ်ဆိုမှတော့တစ်ခုခုလုပ်ချင်လို့ပေါ့။ ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ တစ်ချို့က နိုင်ငံခြားသွားဖို့၊ တစ်ချို့က နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့၊ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ဒီလိုပဲဘာသာစကားတစ်မျိုးထက်ပိုပြီးတော့သိချင် တတ်ချင်တာနဲ့သင်တာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တော်တော်များများက သင်တာသင်တယ်။ ကိုယ်ဘာလို့သင်မှန်းမသဲကွဲဘူး။ သူများသင်လို့၊ မိဘက အသိုင်းအ၀ိုင်းကတိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီး သင်နေကြတာများပါတယ်။ အဲလိုမျိုးဆိုရင် အထိန်းအကွပ်မရှိပဲ စာလုပ်ချင်မှလုပ်မယ် ကျောင်းတက်ချင်မှတက်မယ် တက်ရင်လည်းစိတ်မပါ တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာစကားတစ်မျိုးကိုသင်မယ်ဆိုရင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားပါ။ ငါကတော့ဘာလုပ်မယ် ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
မကြောက်ပါနဲ့ဆိုတာထက် မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ဆိုပိုမှန်ပါတယ်။ စာသင်နေချိန်အတွင်း ပြောမှားဆိုမှား
ရေးမှား မှာမကြောက်ပါနဲ့။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အားလုံးကကိုယ့်လိုပဲမတတ်လို့လာတက်နေကြတာပါ။ အားလုံးတန်းတူပါပဲ။ ပြောဆိုဖို့မကြောက် မတွန့်ဆုတ် မှသာ တတ်မြောက်မှာပါ။ ကလေးလေးတွေ ဘာသာစကားသင်ရင် တတ်မြန်တယ် သင်ရတာလွယ်တယ်ဆိုတာ သူတို့က အမှားလုပ်မိမှာဝန်မလေးကြလို့ပါ။
မှားတာ မှန်တာတွေကိုလည်းသူတို့ကမသိကြတော့ ပြောလိုက်ဆိုလိုက်၊ သူတို့မှားရင်လူကြီးတွေကပြင်ပေးလိုက်နဲ့ အတတ်မြန်သွားတာပါ။ အကယ်၍များအမှားလုပ်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေရင် အမှန်ကိုမသိနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင် သေသေချာချာမတတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ပြောပါ လုပ်ပါ ရေးပါ။ မှားမှာ မကြောက်ပါနဲ့။ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ မှားရင်းနဲ့ အမှန်တွေအများကြီးတတ်လာမှာပါ။
လုပ်ရသေးတာပါပဲ။ အသစ်ဆိုရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ အချိန်သက်သက်တစ်ခုပေးပြီးတော့ လေ့ကျင့်ပါ။ နွှေးပါ။ ကြိုဖတ်ပါ။ လေ့ကျင်ရင် စာတွေကိုမှတ်မိပြီး နွှေးလိုက်ရင် ပိုပြီးတော့စွဲသွားပါတယ်။ ကြိုဖတ်ပါဆိုတာက ကိုယ်ကနောက်နေ့သင်မယ့်စာကိုကြိုသိနေရင် အတန်းမတက်ခင်စာကိုကြိုဖတ်ပါ (ဥပမာ။ Chapter-1 သင်လို့ပြီးလို့ နောက်နေ့ Chapter-2 သင်မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေရင်)။ အတန်းထဲမှာစာသင်တဲ့အခါ အရမ်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ အချိန်ပေးရဖို့အခက်အခဲရှိနေရင် နေ့တိုင်း မနက် နာရီဝက်၊ ည နာရီဝက်ပဲ မှန်မှန်လုပ်ပါ။ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ကိုယ့်ဦးနှောက်ကစာတွေနဲ့ထိတွေ့နေသလိုဖြစ်နေမှာပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ဖို့အခွင့်အရေးမပေးခဲ့ပဲ ကြီးလာမှသင်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာရင် စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဟာ ငါကကြီးပြီ သင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီး
မတွေးပါနဲ့။ ကိုယ့်မှာရည်မှန်းချက်ရှိပြီး တကယ်တတ်ချင်ရင် တတ်မှာပါ။ အသက် (၃၀) (၄၀) အရွယ် အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေတောင် သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လိုဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်စာကိုသင်တာ အသံထွက်တွေတောင်အရမ်းပီတဲ့အထိပြောတတ်ကြပါတယ်။ အရမ်းကိုထူးချွန်ကြပါတယ်။ သူတို့လိုဆန့်ကျင်ဘက်
ဘာသာကိုတောင် ဒီလိုအသက်အရွယ်တွေက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တတ်မြောက်ကြတယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်းအားငယ်စရာမလိုပါဘူး။
ရည်မှန်းချက်ရယ် အချိန်ရယ် ကြိုးစားအားထုတ်မှုရယ် အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့တစ်နေ့ကျရင် ဧကန်မုချအောင်မြင်မှာပါ။ အားလုံးပဲတစ်နေ့ကိုယ်ရည်မှန်းထားသလို အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Posted by Winkabar at 8:16 PM6comments:
A "proverb" isashort, traditional saying in general use. It usually expresses some obvious truth or familiar experience.
Here are some proverbs that are well known in English, though some of them come from other languages. The meanings given are generally accepted meanings, though other interpretations may be possible.
အခုပြောမယ့် စကားပုံတွေမှာ သိပြီးသားတွေလည်းပါမှာပါ။ တခြားအဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်း ယူလို့ရပါသေးတယ်တဲ့။
မုန့်ဆီကြော်က ဘယ်နေမှန်းမသိ၊ နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလား ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ မူရင်းစကာပုံမှာက တံတားဆီတောင်မရောက်သေးဘဲ ကူးဖို့ရာ ပြင်မနေနဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်။
ခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောထားရင် မတတ်ဘူး။ စာမေးပွဲနီးမှ တစ်ပွဲတိုးကျက်တာ အဓိပ္ပာယ်ကို အကျအနမသိတော့ မေ့တယ်ပေါ့။ စာကျက်ရင် ရလွယ်တယ်၊ မေ့လွယ်တယ်။
မဟုတ်တာလုပ်ရင် ဘယ်သူမှ ခေါင်းငုံ့မခံဘူး။ မူရင်းစကားပုံမှာ တင်စားတာက ခြေလက်မရှိတဲ့ တီကောင်တောင် ပြန်ခံပက်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါ။
* worm (noun) = တီကောင်/small thin animal with soft body and no legs
* turn (verb) = ပြန်ပက်၊ ငုံ့မခံ/revolt, fight back
အရာရာမှာ အတိုင်းအတာရှိတယ်။ အတိုင်းအတာတစ်ခုကို ကျော်လာရင် လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ မူရင်းစကားပုံမှာ ကုလားအုတ်ကို ခါးကျိုးစေတာ ယုတ်ဆွအစုံး ကောက်ရိုးရဲ့ ပယောဂတောင်မကင်းဘူး လို့ဆိုထားပါတယ်။ လေးလွန်းလို့ ခါးကျိုးသွားတာ ကောက်ရိုးပေါ့တယ်ဆိုပေမယ့် သူလည်းပဲ တရားခံလို့ ပြောချင်တာ။ ဘူးလေးရာ ဖရုံဆင့် ဆိုတာမျိုးပေါ့။
* straw (noun) = ကောက်ရိုး/dried stalk of grain (like grass)
* camel (noun) = ကုလားအုတ်/large long-necked animal in the desert
အချက်အပြုတ်ကောင်းတဲ့ မိန်းမကို စွဲတယ်တဲ့။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစု၊ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးခြင်းအားဖြင့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူကို ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာ။ နေ့စဉ်ချက်ကျွေးရမယ်လို့ မတောင်းဆိုကြပေမယ့် ကိုယ့်မိန်းမ အချက်အပြုတ်ကောင်းတယ်ဆိုရင် ယောင်္ကျားတိုင်း ဂုဏ်ယူချင်ကြတာပဲလေ။
* way (noun) = နည်းလမ်း၊ ချဉ်းကပ်ရာလမ်း/path; route
ဒါကတော့ သိကြပါတယ်..လိုလျှင်ကြဆ နည်းလမ်းရ လို့ဆိုတာပါ။
* will (noun) = ဆန္ဒ/strong determination, desire.
* way (noun) = နည်းလမ်း/path, method
နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစား ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားလိုပါပဲ။ အိပ်ယာပေါ်လှဲနေမှ နဖူးပေါ်လက်တင်နိုင်တာလေ။ မတ်တပ်ကြီး တင်လို့မှ မရတာ။ ဦးနှောက်ကို အနားပေးပြီး စဉ်းစားယူလို့ပြောတာ။ မူရင်စကားပုံမှာတော့ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်တွေဟာ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ နေရင်းရတာလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
* advice (noun) = အကြံဥာဏ်/recommendation as to what to do
* pillow (noun) = ခေါင်းအုံး/cushion to rest your head on sleeping
Posted by MM Scholar at 5:20 AM No comments:
Labels: MMThinker, Proverbs
Posted by MM Scholar at 12:00 AM No comments: